ऊर्जा मन्त्री वर्षमानले दिए कुलमानलाई ५ होमवर्क « Clickmandu
ऊर्जा मन्त्री वर्षमानले दिए कुलमानलाई ५ होमवर्क
प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७४, मंगलवार ०९:४५
काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विभिन्न ५ होमवर्क दिएका छन् ।
लोडसेडिङको अन्त्यपछि प्राधिकरणको आगामी कार्ययोजना के हुन सक्छ, ती कार्ययोजना कार्यान्वयनका आधार के हुन सक्छन् ? र, हाल चलिरहेका काम तथा कारवाहीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका तयार पार्ने लक्ष्यका साथ मन्त्री पुनले होमवर्क दिएका हुन् ।
मन्त्री पुनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन र परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो ३ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि प्राधिकरणका ३० कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् ।
गत वर्ष २५.८५ प्रतिशतमा रहेको चुहावट घटेर २२ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ । मानवीय रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिने चुहावटको मात्रा अझै ७ प्रतिशत घटाउन सकिने विज्ञहरुले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री पुनले चुहावट कम्तीमा पनि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । यस्ते प्राविधिक चुहावट हुने क्षेत्रमा समेत समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विद्युत् चोरी तथा हुकिङ हटाएर पछिल्लो दिनका सकारात्मक परिणाम निकालेको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको प्रशंसा गरेका मन्त्री पुनले प्राविधिक तथा मानवीय चुहावट घटाएर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान निर्देशन दिएका हुन् ।
निर्माणधिन आयोजना समयमा सक्नू
मन्त्री पुनले निर्माणाधिन आयोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति समेत चासो राखेका छन् । आफू अर्थमन्त्री हुँदा नै लौ सकियो भनिएको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको म्याद ८ पटक थप भइसकेको छ । चिनियाँ ठेकेदार झियालिङको कारण लामो समयदेखि अलपत्र जस्तै रहेको कुलेखानी तेस्रो चालु आर्थिक वर्ष भित्रै जसरी भएपनि सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
सधै ३ महिनमा सकिइहाल्यो भनेर बस्ने अवस्था छैन, तत्काल कुलेखानी तेस्रो स्म्पन्न गरेर राष्ट्रिय पणालीमा विद्युत् जोडिनुपर्दछ, मन्त्री पुनले भने ।
यस्तै प्राधिकरणकै लगानी रहेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति पनि मन्त्री पुनले चासो राखे र तत्काल सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिए ।
कूल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण लामो समयदेखि रोकिदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा निर्माण कार्यले गति लिएपनि सन्तोषजनक रहेको छैन ।
माथिल्लो तामाकोशीमा किन ढिलाई ?
राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आफू अर्थमन्त्री हुँदा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाईप्रति पनि मन्त्री पुनले चासो राखे ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेलम्याक्सले महत्वपूर्ण काम गर्न नस्क्दा आयोजनामा ढिलाई भइरहेको छ । ३१० र ३७० मिटर लामो ठाडो सुरुङ निर्माणमा भारतीय ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री आयात गर्न सकेको छैन । आयोजनामा २०७५ मंसिर मसान्तमा सकिने बताइएपनि ठेकेदारको काम गर्ने शैलीका कारण तोकिएको समयमा पूरा हुने वा नहुने आशंका बढेर गएको छ ।
पछिल्लो पटक शेयर वितरण प्रणाली अवैज्ञानिक भएको भन्दै दोलखाका केही राजनीतिक दलले आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका कारण कतै आयोजनामा थप ढिलाई त हुँदैन भन्ने आशंका समेत बढेर गएको छ ।
अध्ययनमा रहेका आयोजना छिटो सक्नू
मन्त्री पुनले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई चोथो नम्बरमा अध्ययनमा रहेका सबै आयोजनालाई शिघ्र सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले खर्चको कुनै चिन्ता नलिन र त्यसको जिम्मा आफूलाई दिन भन्दै अध्ययनमा रहेका सबै आयोजनालाई तत्काल अध्ययन सक्न र कुनै पनि ढिलाई नगर्न कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
हाल दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुण, सुनकोशी जस्ता ठूला आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेको छ । प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागले ती आयोजना अध्ययन गरिरहेका छन् ।
घुस र अनियमितता रोक
मन्त्री पुनले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शुन्य सहनशिलता कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न र कुनै पनि छुट नदिन समेत निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लो दिनमा पनि प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर जडानमा, लोड स्वीकृति दिदा समेत घुस लिने गरिएको छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्व सक्रिया, इमान्दार र प्रभावकारी भएर मात्रै नहुने भएकाले मातहतका कर्मचारीलाई समेत इमान्दार र मर्यादित बनाउन समेत उनले निर्देशन दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो ३ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि प्राधिकरणका ३० कर्मचारी घुस लिदा लिदै पक्राउ परेका छन् ।
सबैलाई जिम्मेवार बनाउन पनि घुस नियन्त्रण अभियान साथृक रुमपा अगाडि बढाउनुपर्ने र कुनै पनि जिम्मेवार कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिए, उनीहरुसँग घुस लिए कडा कारवाही गर्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिए । उनले प्राधिकरणका क्रियाशिल टे«ड यूनियनलाई पनि जिम्मेवार भएर देश र जनताको सेवामा लाग्न निर्देशन दिए ।